Iinkampani ezine ezinezahlulo ezilungileyo kwi-Ibex 35 | Ezezimali
Iinkampani ezine ezinezahlulo ezilungileyo kwi-Ibex 35
Ngokwedatha ebonelelwe yiReuters, i-IAG, i-Endesa, i-Enagás kunye neRepsol okwangoku zizabelo kunye nesona sivuno siphezulu kwizalathiso ezikhethiweyo zezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. ziba phakathi kwe-6% kunye ne-8%. Ngokuhlawulwa okungagungqiyo kwaye kuqinisekisiwe minyaka le, nantoni na eyenzekayo kwiimarike zezabelo kunye nokusasazwa okuphakathi konyaka okanye ngonyaka kuxhomekeke kumgaqo-nkqubo womvuzo wenkampani nganye.
Ngayiphi na imeko, sisiqingatha kuphela esikwipotifoliyo yotyalo-mali yabahlalutyi abaphambili bezemali. Ngokukodwa, kunjalo IAG kunye neRepsol abo bonwabela ukuthembakala kwaba basebenzi bezemali. Ngesindululo esicacileyo sokuthenga xa uqikelela ukuba basenamandla aphawulekayo okuhlaziya. Ngelixa enye yazo, enje nge-Endesa, sele inyukile kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo kwaye ikwimeko yokulungiswa kwezobuchwephesha kuqwalaselo lwamaxabiso ayo kwimarike yemasheya.
Ngayiphi na imeko, zenza iasethi yemali enomtsalane kwezona profayili zotyalo mali zilondolozayo. Akumangalisi ukuba ukuqesha kwabo kuyinxalenye yesicwangciso-qhinga sotyalo-mali sokwenza ipotifoliyo yotyalo mali ingeniso esisigxina phakathi kokungafaniyo. Ngembuyekezo kulondolozo olungenakufezekiswa nangayiphi na indlela ngayo nayiphi na imveliso yebhanki (iidipozithi zexesha, amanqaku ezithembiso okanye iiakhawunti ezihlawula kakhulu). Kwimeko apho bekwazi ukufikelela kumanqanaba athobekileyo e-1%, yiyo le nto bayibonisayo ngalo mzuzu.
1 Inzuzo kwizabelo
2 I-repsol ikhefu kunye neenkxaso zayo
3 IAG: uthathe ithuba lokwehla kweoyile ekrwada
4 Yiba neeEnagás kwigumbi lokulala
Njengoko sisondela kwiinyanga zasehlotyeni ezinqwenelekayo, isavuno semivuzo esasazwe ziinkampani ezidweliswe kwii-equities zesizwe into engaphezu kwe-5%. Ngokuphuculwa kwezishumi zeepesenti ngokuthelekiswa nemida yokulamla yonyaka nje omnye odlulileyo. Ngale ndlela, enye yeenkampani ezikhokelayo kulwabiwo lwezahlulo, ezinje ngenkampani yombane i-Endesa, ikwizikhundla zokusika emva kokufikelela kwinqanaba elitsha lonyaka kunye neembali ezingama-23,30 ngoMatshi ophelileyo.
Okwangoku akukho sizathu sakuxhalaba lo gama ihleli nje ngaphezulu kwe-19,72 euro Nguwuphi umnqamlezo onomyinge ohambahambayo olula weeseshoni ezingama-200 zokurhweba. Nangona ilahlekile ngeenxa yepesenti enye kwezi nyanga zimbini zidlulileyo. Ngemvakalelo yokudinwa ekhokelela ekubeni abe yeyona nkampani imbi yombane ngalo mzuzu. Kunzima kuye ukuba anyuke kwaye ngalo mzuzu uxinzelelo lokuthengisa ngokucacileyo kumthengi. Umbuzo ngoku uza kuhlala ixesha elide kangakanani.
I-repsol ikhefu kunye neenkxaso zayo
Kwelinye icala, inkampani yeoyile yesizwe ihlala ithoni elungileyo kulungelelwaniso lwamaxabiso ayo kwiimarike zezabelo. Apho iye yaphula khona inkxaso ebinayo ngaphambili kwaye ukuya kwinqanaba lokuba yenye yexabiso elinamandla kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Phakathi kwezinye izizathu, ngenxa yokuxhomekeka kwayo okuphezulu kwixabiso leoyile ekrwada, njengoko sibonile kwiiveki ezidlulileyo. Apho umphanda weoyile ukumanqanaba kancinci ngaphezulu kweedola ezingama-70.
Ngelixa kwelinye icala, lolunye ukhuseleko olunikezela ngesivuno esiphezulu, malunga ne-6% ngonyaka. Ngeentlawulo ezimbini ngonyaka ngamnye kwaye oko kunokuba sisikhuthazo sokufumana izabelo zakho ukusukela ngoku. Ngayiphi na imeko, sesinye sezindululo ngokungathandabuzekiyo ekufuneka zibekhona thaca kwingxowa-mali yethu yotyalo-mali. Uninzi lwabahlalutyi beemarike zezabelo zilumkisa. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
IAG: uthathe ithuba lokwehla kweoyile ekrwada
Elinye lamaxabiso ahambisa igalelo elinomtsalane yile nqwelo moya, egcinwa kwifayile ye- cacisa uptrend. Inokuba lithuba elihle lotyalo-mali ukuba ixabiso leoyile liyehla kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ukuya kwinqanaba lokuba ungafezekisa ukubuya okuphezulu kule meko siyicebisayo. Kwelinye icala, unokuxhamla kunyuso lokuhamba kwabakhenkethi kwilizwe liphela. Ukuba lelinye lawona maxabiso anomdla kwi-Ibex 35.
Ngokuchasene naye unamathandabuzo avela kuye Brexit kwaye inokumisa ukunyuka kwayo okunokwenzeka kuqwalaselo lwamaxabiso ayo. Iya kuba yenye yezinto ezinokumohlwaya kakhulu amaxabiso kwaye sesinye sezizathu zokuba kutheni abathengisi bevela kwiimarike zesizwe zokulingana. Apho kungathandabuzekiyo ukuba umngcipheko othile ojikeleze inqwelo moya yaseYurophu. Ngaphandle kokuxabisa okunomtsalane okwangoku.
Yiba neeEnagás kwigumbi lokulala
Okokugqibela kokhuseleko oluhambisa olona lwabiwo-mali luhle okwangoku yinkampani yegesi kurhulumente. Ngaphandle kwento yokuba kwiinyanga nje ezidlulileyo ebene umlambo othengisa kakhulu. Kodwa sesinye sezona zindululo zokuzikhusela kwezemali. Ngokusebenzisa imodeli ezinzileyo yeshishini engahambelaniyo nemimangaliso emikhulu.
Kwelinye icala, yinto efanelekileyo yokubheja ukwenza ibhegi yokonga ezinzileyo kwixesha eliphakathi nelide. Ngentlawulo yonyaka yesahlulo esingaphezulu kancinci kune-6% ngeentlawulo ezimbini ngonyaka. Esi siphakamiso sokutshintshiselana ngesitokhwe akufuneki sisilele kuyo nayiphi na ipotifoliyo yotyalo-mali ekhuselayo okanye ekhuselekileyo apho ukhuseleko lokonga kufuneka lube ngaphezulu kwezinye izinto ezinoburharha. Oko kukuthi, awufanelanga ulindele imbuyekezo enkulu, kodwa nokuba ungakushiyeli ii-euro ezininzi apha endleleni. Ngaphandle kokuxabisa okunomtsalane okwangoku okunokukunceda ekuthengeni kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iinkampani ezine ezinezahlulo ezilungileyo kwi-Ibex 35
Iinkwenkwezi ezintsha zeemarike ezikhulayo
Ibex 35 phakathi kwamanqanaba e-9.200 kunye ne-9.600 yamanqaku